विजनेस – MEDIA DARPAN
जेसिबिको २२औ शाखा बनेपाको जनागलमा
Media Darpan Pvt. Ltd.	 १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार १८:५६ 0
बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रको बिज्ञ मा डा. पोख्रेल नियुक्त !
काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनदेखि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमूल्य उकालो लाग्दै गएको छ । आइतबार नकारात्मक सर्किट लागेको दिनलाई छाड्ने हो भने ५ दिनदेखि यो सेयरको कारोबारमा निरन्तर सकारात्मक सर्किट लाग्दै गएको छ । अघिल्लो…
४ मंसिर, गोरखा । यसबर्ष गोरखामा सुन्तला उत्पादनमा ढिलाइ भएको छ । पाक्ने बेलामा समेत सुन्तला हरियै रहेको किसानहरुले बताएका छन् । ‘अघिल्लो बर्ष यतिबेला ६–७ गाडी सुन्तला बेचिसकेका हुन्थ्यौ,’ गोरखा नगरपालिका–१४ भट्टवेशीकी कृषक निर्मला थापाले…
४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । साताको अन्तिम दिन बिहीबार सेयर कारोबार रकम ६ अर्ब भन्दा धेरै भएर नयाँ रेकर्ड राखेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले सेयर कारोबार रकमले नयाँ…
४ मंसिर, सप्तरी । ‘एउटा लाइफव्याय साबुनको मूल्य कति ?’ बिक्रेताका अनुसार दुई वटा तौलमा आउने यो साबुनको मूल्य ९५ ग्रामको ३० रुपैयाँ र १२५ ग्रामको ३५ रुपैयाँ पर्छ । ३० रुपैयाँ र ३५ रुपैयाँ पर्ने साबुनको मूल्य ३ हजार ८ सय परेको सुन्दा पक्कै…